Shenzhou-12 ခရီးစဉ်၏ တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးများအတွက် လိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်း ဂုဏ်ပြု အခမ်းအနားပြုလုပ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကျိုချွမ် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ Shenzhou-12 လူလိုက်ပါသော အာကာသခရီးစဉ်၏ အာကာသယာဉ်မှူးများအား လိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်းအခမ်းအနား တက်ရောက်နေသော အာကာသယာဉ်မှူး နွဲ့ဟိုင်စိန့် (လယ်) ၊ လျိုပေါ်မင် (ယာ) နှင့် ထန်းဟုန်ပေါတို့အား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကျိုချွမ်၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
Shenzhou-12 လူလိုက်ပါသော အာကာသခရီးစဉ်၏ တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦးအား လိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်း ဂုဏ်ပြုငအခမ်းအနားကို နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာ Wentiange ရင်ပြင်တွင် ဇွန် ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်း၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံက လက်ရှိ တည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်သော အာကာသစခန်းတွင် ပထမဆုံး တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးများ နေထိုင်ကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြမည့် အာကာသယာဉ်မှူးများဖြစ်သော နွဲ့ဟိုင်စိန့်၊ လျိုပေါ်မင် နှင့် ထန်းဟုန်ပေါ တို့သည် လူလိုက်ပါသောအာကာသအစီအစဉ်၏ ခေါင်းဆောင် Li Shangfu ၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် နံနက် ၆:၃၂ နာရီတွင် ဂုဏ်ပြုပို့ဆောင်ခြင်း နေရာမှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။
Shenzhou-12 အာကာသယာဉ်ကို ဇွန် ၁၇ ရက် (ပေကျင်းစံတော်ချိန်) နံနက် ၉:၂၂ နာရီ၌ လွှတ်တင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး အာသယာဉ်ဝန်ထမ်းများသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသစခန်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် အချိန် သုံးလကြာ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်း၌ နေထိုင်သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
JIUQUAN, June 17 (Xinhua) — A see-off ceremony for three Chinese astronauts of the Shenzhou-12 manned space mission was held in the morning of Thursday at the Wentiange square of Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China.
At the command of Li Shangfu, commander-in-chief of China’s manned space program, astronauts Nie Haisheng, Liu Boming and Tang Hongbo set out at 6:32 a.m., to be the first Chinese astronauts to live and work in the country’s space station currently under construction.
The Shenzhou-12 spaceship is expected to be launched at 9:22 a.m. Thursday (Beijing Time) and the crew will stay in orbit for three months for the construction of China’s space station. Enditem
1- 10- Astronauts Nie Haisheng (C), Liu Boming (R) and Tang Hongbo attendasee-off ceremony for Chinese astronauts of the Shenzhou-12 manned space mission at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, June 17, 2021. (Xinhua/Li Gang)
11- Astronaut Nie Haisheng waves duringasee-off ceremony for three Chinese astronauts of the Shenzhou-12manned space mission at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, June 17, 2021. (Xinhua/Li Gang)
12- Astronaut Tang Hongbo waves duringasee-off ceremony for three Chinese astronauts of the Shenzhou-12 manned space mission at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, June 17, 2021. (Xinhua/Li Gang)
13- Astronaut Liu Boming waves duringasee-off ceremony for three Chinese astronauts of the Shenzhou-12 manned space mission at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, June 17, 2021. (Xinhua/Ju Zhenhua)